Soo Iibso Kiniiniyada Cunnada Iyadoo aan dhakhtar qorin! Khibrad Weightloss oo ku habboon!
Maanta, jirrabaadda ah in la isticmaalo kiniinnada miisaanka lumiya si dhakhso loogu dhimo miisaanka ayaa noqotay mid adag oo adag in la iska caabiyo. In kasta oo waxyaabaha aasaasiga u ah miisaanka oo yaraada ay cunayaan wax yar oo caafimaad qaba isla markaana dhaqaaqaya wax badan, kaniiniyada miisaanka ugu wanaagsan ee miisaanka lagu dhuuqo ee laga heli karo suuqa ayaa laga yaabaa inay dadka qaar ka caawiyaan inay miisaanka iska dhintaan Waxay noqon karaan dookh kafiican dadka ka cabanaya dhibaatooyin caafimaad oo culus miisaankooda iyo dadka aan cunistoodu ka shaqeyn. Kiniiniyadaan cuntada waxay ka kooban yihiin kiciyeyaal iyo waxyaabo kale oo kala duwan oo laga yaabo inay xakameyaan rabitaanka cuntada iyo kordhinta heerka dheef-shiid kiimikaadka. Waxaa jira dhowr kaniini oo miisaan lumis ah oo laga heli karo dukaanka cuntada caafimaadka, dukaanka dawooyinka maxalliga ah iyo dukaamada waaweyn, sidoo kale waxaa laga heli karaa khadka tooska ah.
Kiniiniyada cuntada: Goorma ayey tahay inaad ka fiirsato?
Haddii aad la yaaban tahay haddii kiniinka cuntada laguu qoro uu adiga wax kuu yahay, waxaad u baahan kartaa inaad la tashato bixiyahaaga daryeelka caafimaadka. Waa inaad tixgelisaa in kaniiniyada cuntada badanaa laguugula taliyo shakhsiyaadka qaba BMI (tusmada jirka ee jirka) oo ah 30 iyo wixii ka sareeya kuwaaso caafimaadkoodu wanaagsanyahay. Haddii aad leedahay xaalado buurnida la xiriira oo BMI-gaagu yahay 27 iyo wixii ka sarreeya markaa kaniiniga cuntada laguu qoro ayaa sidoo kale lagu talin karaa. Sidoo kale, kaniiniyada cuntada laguu qoro waxay kakooban yihiin walxo adag waxaana caadi ahaan loo qoraa kaliya isticmaalka muddada-gaaban waxaana badanaa lagu qaataa wareegyo ama dhowr toddobaad illaa dhowr bilood.
Waa Maxay Tusmada Baaxadda Jirkaagu?
Isugeynta cufnaanta jirka waa culeyskaaga oo la xiriira dhererkaaga. Qofka caafimaadka qaba waa inuu lahaado BMI ka hooseeya 25. BMI-yada u dhexeeya 27-35 waa inay yareeyaan kaloriintooda 300-500 kalori maalintii miisaan lumis dhan qiyaastii nus rodol asbuucii. Dadka qaba BMI-yada ka sareeya 35 waa inay lumiyaan 1-2 rodol usbuucii, iyadoo laga dhimayo kaloriin dhan 500-1,000 kalori.
Miisaan-dhimista miyey daawo u tahay dhammaan dhibaatooyinkaaga caafimaad? Gabi ahaan maahan, laakiin waxay si xagjir ah hoos ugu dhigi kartaa qatarta cudurka halista ah iyo dhimashada. Miisaanka oo yaraada ayaa la caddeeyey inuu hagaajinayo cadaadiska dhiigga, xasilinta heerarka dufanka iyo gulukooska, yareynta dhacdooyinka iyo astaamaha cudurka macaanka ee dadka waaweyn ku dhaca, iyo inuu yareeyo fursadaha wadno-qabad iyo cudurrada wadnaha iyo xididdada dhiigga.
Kiniinnada miisaanka oo yaraada ayaa ah kuwa ugu dhakhsaha badan uguna waxtarka badan ee miisaankaaga oo yaraada. Kiniinnada miisaanka oo yaraada waa inay la socdaan cunto ay ku yar tahay sonkorta iyo karbohaydraytyadu. Kiniiniyada cuntada keligood ma noqon karaan kuwo gebi ahaanba waxtar leh iyada oo aan loo heellanayn in la beddelo qaababka cunnada aasaasiga ah iyo in la yareeyo isticmaalka sonkorta.
Kiniiniyada cuntada ee ugufiican suuqa: kiniiniyo miisaan lumis ah ayaa jira?
Waxaa jira seddex qaybood oo daaweyn ah oo badanaa ay isticmaalaan ragga iyo dumarku kuwaas oo cayil ama culeys badan leh oo jeclaan lahaa inay lumiyaan miisaanka xad-dhaafka ah. Seddexdan qaybood waxaa ka mid ah kuwa xakameynaya rabitaanka cuntada, foomamka daawada lagu buufiyo, iyo kiniiniyada miisaanka badan (OTC).
Xakameeyayaasha cuntada - Qaar ka mid ah noocyada ugu caansan ee xakamaynta rabitaanka cuntada oo dad badan oo miisaan culus maanta isticmaalaan waxaa ka mid ah Tenuate iyo Meridia. Daawooyinka sida shaqadan loogu talagalay in lagu beddelo sida kicintu ugu dhacdo qayb ka mid ah maskaxda aadanaha oo loo yaqaan 'hypothalamus' oo leh shaqadda xakamaynta cuntada qofka. Xakameeyayaasha cuntada waxay sababaan daawada norepinephrine iyo serotonin ee la soo saaray inay xannibmaan, taasoo runti qofka ka dhigeysa inuu dareemayo sidii inuu cunay cunno weyn, marka dhab ahaantiina ay wada cuneen wuxuu ahaa cunno aad u yar. Heerka sare ee kiimikooyinka ku jira xakamaynta cunnada ee maskaxda gaadha, ayaa inbadan qofku dareemi doonaa dareenka dhereg, taas oo macnaheedu yahay inay waxbadan cuni doonaan Maxay faa'iido ahaan u yeelan kartaa dadka qaba buurnida u adeegsaneysa tabsyadan markii noocyada cuntooyinka qaarkood la cuno, waxay lashaqeeyaan kuwa cuncun-joojiyayaasha cunnada si ay u kiciyaan jawaabta gaajo la'aanta. Maxay aad ugu fiican tahay ficilkan waxaa lagu samayn karaa cunto kaloori-yari ku jirto oo ay ku jiraan xulashooyin cunto caafimaad leh.
Foomka rijeetada xayiraadda dufanka Nooca noocan ah ee kaniiniyada cuntada ah wuxuu ka hortagaa lipase, oo ah enzyme laga helo jirka. Nidaamka caadiga ah ee nidaamka jirku inta badan sameeyo ayaa ah inuu diro dufanka laga cuno noocyada kala duwan ee cuntada ee habka dheef-shiidka qofka iyo marinka mindhicirka. Marka kiniiniyadaan la isticmaalo, qaddar cayiman oo dufan ah oo la cuno ayaa markaa si dhakhso leh loogu gudbiyaa jidhka qofka, taas oo ka caawinaysa ka-hortagga inay u nuugo.
Daawooyinka miisaanka la iska iibsado (OTC) - Waxaa jira daawooyin fara badan oo laga iibsan karo ugu badnaan dukaamada waaweyn ee xaafadda ama dukaanka dawooyinka, xitaa waxaa laga heli karaa dhowr degel internet ah. Qaabka ugu badan ee kaniiniyada miiska looga iibsado ay u shaqeeyaan ay tahay iyadoo la siinayo dheef-shiid kiimikaadka jirka kor u qaadis iyo kor u qaadista heerka tamarta isticmaalaha. Marka dheef-shiid kiimikaadka qofka la kordhiyo, waxay sidoo kale sababtaa awoodda unugyada dufanka leh ee jirka gudihiisa ku jira ee la gubo si kor loogu qaado heerar sare. Natiijadu waa kalooriyadu waxay bilaabaan inay si dhakhso leh u gubtaan. Laba ka mid ah maaddooyinka ugu caansan ee loo isticmaalo OTC tabs waa kafeyn iyo shaah cagaaran.
Markaad doorato daawada laguu qoro, waxaad u baahan doontaa warqad dhakhtar kuu qoro. Haddii aad rabto inaad ogaato sida kiniinka ugu fiican ee kiniiniyada cuntada suuqa ku yaal markaa waa kan liiska daawooyinka loo iibiyo daawooyinka laguu qoro suuqa. Kaliya u maro kaniiniyada daawada ee soo socota waxaadna ka heli doontaa fikrad ku saabsan kiniiniyada ugu fiican ee cuntada kuu ah adiga.